Amerikana Mpianatra Lalàna Manampy Ireo Mpitady Fialokalofana, Nentanin’ny Tantaran’ny Fianakaviany Manokana · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 12 Mey 2017 5:18 GMT
Mpianatra lalàna, Sara Ehsani-Nia (eo afovoany) nandritra ny famoriam-bahoaka mitaky ny famotsorana ny ankizy mpitady fialokalofana nogadraina ao amin'ny fonjan'ny ankizy tsy ampy taona ao akaikin'i Sacramento, California. Sary: Zaidee Stavely
Ity tantara avy amin'i Zaidee Stavely ity dia nivoaka voalohany tao amin'ny PRI.org tamin'ny 20 Aprily 2017. Navoaka eto indray izany noho ny fiarahamiasa eo amin'ny PRI sy ny Global Voices.
Ny rindrina marevaka ao amin'ny rindrin'ny Oniversite ao California, kabinetra momba ny lalànan'ny fifindramonina an'i Davis dia mampiseho taratasy avy amin'ireo mpifindramonina any am-ponja sy rojo vy nivadika vorona quetzal, fanoharana amin'ny asan'ny mpianatra .
Mikaroka momba ireo mpianatra nandoko rindrina ny Chicano ary “nisafidy ny vorona quetzal eo ambonin'ny domoina satria maneho fahalalahana izany”, araka ny fanazavan'ny mpiara-mitantana ny kabinetra, Holly Cooper. “Amin'ny angano Mayana, heverina fa raha atsofoka ao anaty tranom-borona ny quetzal, dia ho faty”.
15 minitra monja miala ny oniversite no misy ny tranon'ny fonjan'ny ankizy tsy ampy taona izay nifanaraka tamin'ny Biraon'ny Fanorenam-ponenana ho an'ny Mpitsoa-ponenana mba hihazonana ireo ankizy tsy ampy taona niampita irery ny sisintany Amerikana.
“Mahasosotra sy mampiahiahy na dia mitondra fiara ao amin'ity fonja ity aza, satria an'ny sekoly ambony vaovao ny varavarana roa ao ambany, izay toerana tsy maintsy iandrasan'ny mpanjifa ahy”, hoy ilay mpianatra lalàna Sara Ehsani-Nia. “Raha tokony ho izany, any am-ponja izy nefa tsy nanao heloka. Ohatra amin'ny rafitra simba tanteraka ao amintsika izany. “
Nisolo tena mpanjifa dimy i Ehsani-Nia tamin'ity taona ity, tamin'ny alalan'ny kabinetran'ny lalànan'ny fifindramonina, izay ahafahan'ny mpianatra mamaha ireo trangan-javatra, miaraka amin'ny tari-dalana. Noforonina ihany koa ny kabinetra tahaka ity – mifantoka momba ny fifindramonina sy ny mpitady fialokalofana. Maro amin'ireo mpianatra ao amin'ny kabinetra UC Davis no avy amin'ny fianakaviana mpifindramonina mihitsy.
«Teraka tao Los Angeles aho ary mpifindramonina avy ao Iran ny ray aman-dreniko», hoy i Ehsani-Nia. “Mitovy ny fototra: tonga ao amin'ity firenena ity tsy manana na inona na inona ary tsy mahafantatra na iza na iza ianao”.
Saingy mahafantatra i Ehsani-Nia fa samihafa tanteraka amin'ny ankamaroan'ireo mpanjifany ihany koa ny tantaran'ny fianakaviany, izay ankizy tsy ampy taona tsy nisy niaraka avy any Amerika Afovoany ny telo tamin'ireo mpanjifany [arovany].
“Tsy nogadraina ny fianakaviako”, hoy izy. “Samihafa tanteraka. Fonja ny fanagadrana fifindramonina, fepetran'ny fonja izany. Misy fiantraikany lehibe ara-psikôlôjika izany. “
G.E., tovolahy 14 taona avy any Honduras no mpanjifa [narovana] farany an'i Ehsani-Nia. Nangataka i Ehsani-Nia mba tsy hampiasa afa-tsy ny fanombohan'ny anaran'ny lehilahy ihany isika satria tsy ampy taona ao amin'ny trano fitaizana ankizy izy. Nilaza i G.E. fa nandositra fampijaliana goavana tao an-tranony tao Honduras izy. Nandeha irery izy, niampita ny sisintan'i Texas ary tratran'ny manampahefana. Tsy manana fianakaviana ao Etazonia izy. Nahazo fialokalofana izy tamin'ny volana Janoary, saingy mbola any am-ponja. Tao no nahitan'i Ehsani-Nia azy.
“Isaky ny mitsidika azy izahay, dia mitondra kilalao karatra ary milalao karatra na daomy miaraka aminy”, hoy i Ehsani-Nia. “Nihevitra izahay fa hampiala voly azy izany ka ho mora ny mametraka fanontaniana sarotra aminy izay ilainay valiny mba hamitàna ny fangatahanay hamotsorana azy”.
Navotsotra ihany ilay tovolahy nony farany. Nanatevin-daharana ny famoriam-bahoaka tao ivelan'ny foiben'ny fonja i Ehsani-Nia mba hanoherana ny fihazonana ireo ankizy mpifindramonina am-polony tsy nisy olon-dehibe niaraka taminy, sy hankalaza ny famotsorana an'i G.E. Nahita azy vao avy navotsotra i Ehsani-Nia .
“Tena niavaka tanteraka izany”, hoy izy. “Nitafy ny akanjo notafiany tamin'izy nentina tao amin'ny fonja izy, herintaona lasa izay. Ary araka ny azonao an-tsaina, somary hafakely ity tovolahy 14 taona ao anatin'ny fitomboany ity. Saingy ara-bakiteny, izany no hany zavatra nananany: T-shirt, shorts sy kapa.
Nandritra ny famoriam-bahoaka, namaky ny taratasy nosoratan'i G.E. ho an'ireo mpanohana azy, izay nandresy lahatra tamin'ny famotsorana azy sy nanome harona feno akanjo azy ny mpiaro ny zon'ny mpifindramonina iray. “Me gustó la gorra de Red Sox. Tena tiako ilay satroka Red Sox “, hoy izy, sady nihomehy. “Manantena hihaona aminareo aho indray andro any. Con mucho cariño, G.E. Am-pitiavana be, G.E. “
Taorian'ny famoriam-bahoaka, nijanona minitra vitsy tao anaty fiarany i Ehsani-Nia mba hiantso ny reniny. niarahaba ny reniny tamin'ny teny Farsi izy, ary avy eo niteny Anglisy.
“Tadidinao ve ilay mpanjifako 14 taona tao amin'ny fonjan'ny fifindramonina? Navoakanay omaly izy! “, hoy ny fanambarany.
“Tena faly aho, hoy ny reniny namaly. “Tena asa tsara izany. Reharehako ianao.”
Nilaza i Ehsani-Nia fa mahatsiaro voasarika hamaly soa amin'ny maha mpisolovava momba ny fifindramonina azy, ny anton'izany amin'ny ampahany dia ny tantaran'ny ray aman-dreniny.
“Ny ankamaroan'ny zavatra hitanao amin'ny mpianatra rehetra, dia misy ny tranga tsy hita maso tamin'ny lasanao ka mitarika anao hanao karazana hetsika, na tsikaritrao izany na tsia”, hoy i Cooper.
Nanazava ny antony manokana nitarika azy hanao ity asa ity avy amin'ny tantaran'ny fianakaviany izy. Nandositra an'i Rosia ny raibeko tamin'izy mbola kely ary nilaozana avy eo rehefa tsy afaka nikarakara azy intsony ny reniny. Nilaza izy fa mahatonga ny mpianatra ho mpiaro zo mafana fò ny tantaran'ny mpianatra.
“Afaka ho lasa mpikaroka ara-kolontsaina ihany koa ny mpianatra, ary hilaza: ‘Holly, aza manao izany’, na ‘Angamba te hanandrana ity ianao’ ‘, hoy i Cooper.
Taorian'ny fanokanana ny filoha Donald Trump, nahazo antso marobe avy amin'ny mpianatra sy ny mpikambana amin'ny fiarahamonina mitady fanampiana ny kabinetra. Ao anatin'ny fanairana ambony ihany koa ny mpanjifa. Miantso na mandefa mailaka saika isan'andro ny mpanjifa, matahotra ny ho voafonja na voaroaka, hoy i Cooper.
Ho an'i Ehsani-Nia sy ny ankamaroan'ny mpianatra lalàna namany, tsapa fa (avy amin'ny tantaram-piainana) manokana ny didim-panjakana navoakan'i Trump momba ny fifindramonina. “Mampatahotra ny mahatsiaro voatafika amin'izany fomba izany”, hoy Ehsani-Nia. “Tena manevateva, ary eo amin'ny sehatry ny asa, mampatahotra ny mahita ny mpanjifanay mandalo fahoriana be loatra”.
Raha miezaka manakana ny olona avy amin'ny firenena sasany tsy hiditra ao Etazonia ny didim-panjakan'i Trump, nitondra fiara tao San Francisco i Ehsani-Nia, nanampy mpivady lehibe Iraniana voafonja tao amin'ny seranam-piaramanidina. Sambany izy niteny Farsi tao anatin'ny asany. Tsapa fa nahafinaritra izany, hoy izy, ary nampahatsiahy azy zavatra nampianarin'ny ray aman-dreniny azy: manome lanja ny maha olom-pirenena azy amin'ny alalan'ny fandahatsa-bato, fanehoana hevitra sy ny fijoroana ho an'ny zon'ny hafa